Impahla eyinhloko ye-Gemlight Pickaxe ingu-carbon high China # 45 steel. Imvamisa sisebenzisa insimbi kaloliwe endala. Yonke i-pickaxe yethu igcwele umzimba we-pickaxe oshubile futhi owenzelwe ukukhetha umumo nembazo ye-ax. Yonke iPickaxe ingumbala wokufafaza. Ubulukhuni yi-HRC42-52. Kokubili ubulukhuni nobulukhuni obungenza i-pickaxe isebenzise isikhathi eside. I-Gemelight pickaxe ihlala isikhathi eside futhi iyikhwalithi ephezulu yokuqinisekisa ukuthi izokwazi ukuthwala umthelela wokuthintana nezindawo zikakhonkolo namatshe.
Kwabagcini bamasimu, abasebenza engadini ngisho nabavukuzi, i-Gemlight ikhetha izembe libasiza ukuba benze umsebenzi wabo ngaphandle kobunzima. Uma futhi ufuna izimbazo zokukhetha ezizothengiswa, vele ubheke ukukhetha kwethu komkhiqizo ngenhla.
Umkhiqizo I-Gemlight noma i-B-cock Sing Cock Imodeli P401
Umkhiqizo Gemlight Noma i-OEM / ODM Izinto Insimbi yekhabhoni ephezulu yensimbi ye-Rail Way
Isisindo 5LB 5.5LB Hoe Blade Ukwelashwa okugcwele kokushisa
Uhlobo lweBlade Forge Umsebenzi osindayo ucezu oluthile Ukuqina kwe-Pickaxe Blade HRC32-42
Ingaphezulu lePikkaxe Uwoyela Anti-ukugqwala camera, futhi umbala ngesineke. Umbala wePikkaxe Blade Umzimba omnyama, nekhanda lipholishiwe
Uhlobo lwe-Pickaxe Eye Round Ikhoyili 6 # Umumo weBlade I-Conical nenye igeja elincane
Isibambo Iyatholakala 90cm Beech Wood IBlade Edge Taper Uniform ukuze usike
P404 Isitimela Khetha Ax
P406 iMatock Pick
P410 I-Railway Pick Ax
Ubuningi 12PCS / ibhokisi
Langaphambilini I-Fordged Hoe
Olandelayo: IMachete Knife